Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha December ee kooxda Juventus oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(Turin) 17 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday xiddiga ku guuleystay abaa-marinta laacibkii ugu fiicnaa kooxdeeda ee bishii Diseembar.
Bianconeri ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu ku guuleytay abaa-marinta xiddigii ugu fiicnaa Juventus bishii Diseembar.
Cristiano Ronaldo ayaa ka sameeyay qaab ciyaareed aan caadi aheyn kooxdiisa kubadda cagta ee Juventus, gaar ahaan kulamadii uu kaga soo muuqday horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Juventus ayaa ku hoggaamineysa horyaalka Serie A 48-dhibcood, kaliya labo dhibcood ayey ka sareeyaan kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Inter Milan.
Cristiano Ronaldo ayaa ahaa sababta ugu weyn ee Juve hoggaanka ugu qabatay miiska kala sareynta horyaalka Talyaaniga, sababa la xiriira goolashiisa muhiimka ahaa uu u dhaliyay kulamadii lasoo dhaafay ay ciyaartay Bianconeri.
Bishii Diseembar ee lasoo dhaafay Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa Juventus u dhaliyay goolal, kaddib afar kulan uu ka ciyaaray horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, wuxuuna dhaliyay 5 gool.
Sheekada intaas oo kaliya kuma aysan ekaanin ee xiddiga reer Portugal wuxuu halkiisa ka sii waday bandhigiisa cajiibka ah, wuxuu dhaliyay 4 gool, wuxuuna caawiyay mid kale, labadii kulan ugu dambeeyay ay la ciyaareen kooxaha Cagliari iyo Rome.
Website-ka rasmiga ah ee kooxda Juventus ayaa lagu shaaciyay in Cristiano Ronaldo uu gudoomi doono abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican kooxda Juventus ee bishii Diseembar, habeenka Axada soo aadan kahor inta aan la baasanin kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Parma, kaasoo qeyb ka ah kulamada 20-aad ee horyaalka Talyaaniga.